Duqa Muqdisho: Maleedahay bajaaj is diiwaangeli, haddii aadan ... | Universal Somali TV
Duqa Muqdisho: Maleedahay bajaaj is diiwaangeli, haddii aadan is diiwaangelinin, haddee waxay noqonee qof u adeegaya cadowga
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa digniin gaar ahi u jeediyay bajaajleyda Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha ayaa marka hore digniin guud u jeediyay wadayaasha mooto bajaajta iyo dadka kale ee gaadiidka ku leh Magaalada Muqdisho, balse aan diiwaan-gishnayn.
"Maleedahay bajaaj, maleedahay gaadiid, haddii uusan gaadiidkaaga diiwaan-gishnayn is diiwaangeli. Haddii aad gaadiidkaaga diiwaan-gishatay, laakiin aad qof ka iibisay, magacaaga weli ku qoran yahay masuuliyadda adaa qaadaaya, adaa masuul ka ah gaadiidkaas iyo wixii dhib ah uu gaysto." Ayuu yiri Duqa Magaalada Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa yiri "Si hadaba taasi looga hortaggo bajaajleydu iyo baabuurta kalaba waxaan leenahay is diiwaangeliya."
Isagoo xalay Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Muqdisho ayuu yiri "Maleedahay bajaaj is diiwaangeli, haddii aadan is diiwaangelinin, muwaadin dhaba Soomaaliya aadan noqonin, canshuurta laguugu leeyahay aadan bixin, haddee waxay noqonee qof u adeegaya cadowga."
Duqa Muqdisho ayaa ugu dambeen yiri "Umadda Soomaaliyeed waxay leedahay hal cadow, halkaas cadowna wuxuu yahay kooxaha argagixisada Al Shabaab, ayagana inaan halmeel uga soo wada jeedsano, oo aan la dagaalano ayuu qorshaheynu yahay."
Kan-xigaSaddex qof oo ku dhimatay qarax halee...
Kan-horeIGAD oo taageertay heshiiska Dowladda...
Ilaalada Axmed Madoobe oo u amba-baxay Dhuusamareeb (SAWIRRO)
54,079,140 unique visits